Fiarovana A + mpivarotra -
Ahoana ny fomba hialana amin'ny radar fampiatoana raha tsy mandany dolara an'arivony amin'ny fampiatoana fampiatoana.
Fantatry ny mpivarotra rehetra fa ny politikan'i Amazon dia miha-hentitra isan'andro, indrindra fa ny mpivarotra manao DropShipping. Ny fiarovana ny mpivarotra + dia hampihena ny fahafaham-pialan-tsasatrao ary hanome anao ny sisiny amin'ny alàlan'ny fihetsika haingana momba ny olana momba ny fahasalamana amin'ny kaonty.
Fa maninona no zava-dehibe ny fiarovana ny mpivarotra?
Fantatry ny rehetra fa ny fampiatoana an'i Amazon no tena fifanarahana. Kaonty 3 amin'ny 10 no tsy azo ampandehanana na dia nandefa Appeals maro aza. Raha mijanona ny kaonty dia mandany $ 1k - $ 2k isaky ny fampiatoana ianao, ary mbola tsy misy antoka fa hampavitrika ianao. A + Seller Protection dia hitahiry ny fotoananao sy ny volanao, ary hampihena ny fahafaha-mampiato anao hatrany amin'ny 80% tadiavin'ny mpivarotra rehetra. A + Seller Protection dia miasa ho toy ny ain'orana ho an'ny mpivarotra Amazon rehetra.
Ny fihenan'ny fampihenana ny asa dia nihena 80%
Ny fandikan-dalàna rehetra dia horaisina avy hatrany izay hampihena ny mety hampiatoana ho azy
Fahasalamana amin'ny kaonty amin'ny toe-javatra tena tsara
Hatramin'ny farany ny fahombiazan'ny fandefasana sy ny fahombiazan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia hitazona ny fahasalaman'ny kaonty amin'ny toerana tena tsara
Coverage ho an'ny fampiatoana amin'ny ho avy
Raha mihantona ianao na dia efa niatrika ny olana rehetra teo noho eo aza. Ho rakofana amin'ny fampiatoana amin'ny ho avy ianao.
Latsaky ny 2 fanitsakitsahana politika na fitakiana AZ ao amin'ny kaonty.
Fiantohana ho an'ny fampiatoana amin'ny ho avy
AZA MISY TSY METY HANAM-PAHASOA NY TOKONY HAHAZOANA
DISOUNT 5% -10% fanampiny
Faingana - Ity tolotra fampiroboroboana ity dia hifarana amin'ny:
Manana fanontaniana momba io drafitra io ve ianao? Jereo ny lisitra eto ambany ho an'ny fanontanianay izay matetika napetraka. Raha tsy voatanisa eto ny fanontanianao dia mifandraisa aminay azafady.
Afaka misoratra anarana ve aho? Raha misy fanitsakitsahana politika mihoatra ny 2 amin'ny kaontiko?
Eny, tsy maintsy mandoa premium fanampiny ianao mandritra ny 4 volana voalohany.
Raha miato aho aorian'ny fisoratana anarana miaraka amin'ny drafitra, mila mandoa vola ve aho?
Ahoana raha miato amin'ny volana iray ihany aho aorian'ny fisoratana anarana amin'ity drafitra ity?
Tokony hanana 6 taona farafahakeliny farafaharatsiny ny famandrihana mba hahazoanao fonony amin'ny fampiatoana. Raha mihantona alohan'ny 6 volana ianao dia tsy mila mandoa afa-tsy 1/3 amin'ireo fonosana taratasin'ny taratasintsika.